Madaxweynaha oo qado sharaf sagootin u sameeyay Safiirka Jabuuti (Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha oo qado sharaf sagootin u sameeyay Safiirka Jabuuti (Sawirro)
Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Xarunta Madaxtooyada qado sharaf sagootin ah ugu sameeyay Danjiraha Jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya Soomaaliya Mudane Dayib Dubbad Rooble oo waqtigiisu uu dhammaaday.
“Xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti oo weligiiba ahaa mid aad u wanaagsan, ayaa gaarey heerkiisii ugu sarreeyay muddadii 7-da sanno ahayd ee Danjire Dayib uu ku sugnaa Soomaaliya. Waxaa uu dalkan ka shaqeynayey xilli aad u adag, ilaa iyo haatanna waxaa uu si dhow ula shaqeeyaa Soomaaliya oo dhan. Waxaan u mahad celinayaa Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka reer Djibouti oo gartey inay inoo sooo xulaan shakhsi daacad ah oo dadaal bad an oo Soomaaliya wax weyn u qabtey”, ayuu yiri Madaxweynaha.
Taliyaha Cusub ee Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha Col. Koofi oo xaflad soo dhaweyn ah loo sameeyay
Madaxweynaha Somaliland oo cafis u fidiyay Siyaasiyiinta Somaliland ee ku sugan Muqdisho